Myanmar Passes the Industrial Zone Law | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Passes the Industrial Zone Law
BusinessInvestment & FinanceLocalProperty & Real Estate
Pyidaungsu Hluttaw, Myanmar’s highest legislature, has approved the highly anticipated comprehensive Industrial Zone Law on May 26.
The statue has 20 chapters and 75 articles. The bill was drafted and announced in August 2019.
The contribution of the industrial sector to the GDP of Myanmar who heavily relies on agriculture was only 10.5 percent in 1990-1991 and significantly increased to 33 percent in 2013-2014, 35 percent in 2014-2015, and 35.4 percent in 2015-2016. The government is aiming to increase the contribution of the industrial sector to 37 percent in 2030-2031.
Yet, the country did not haveastrong legal framework to regulate around sixty industrial zones spread across the country, 29 of which are in Yangon, and to protect both investors and the local community. This law is hoped to fill that blank.
Article 32 of the law allows investors or developers to use the land for 50 years with two 10-year possible extensions.
According to Article 34 (B), the investors who have acquired the lands in the industrial zone must obtain approval from the Regional Industrial Zone Management Committee for his or her project timeline and action plan and implement the project per the proposed project timeline approved by the committee.
If the investor fails to implement the project in the proposed timeline, he or she shall pay 10 percent of the value of the acquired land as fines every year or will have to give up the permit or grant of the use of lands.
Under Article 57, illegal squatting, building roads, or establishments without in the industrial zones are prohibited. Anyone who breaches this prohibition will face not more than three years of jail terms and/or fine.
The law also prohibits any vandalism or destruction of an investor’s business in the industrial zone or development of the industrial zones, under Article 62. Penalties for breaking this article is K500,000 to K2 million.
All the legal cases are under the authority of the police force.
Development of the industrial zones and industrial sector infrastructures, raw materials, cheaper and better logistics, technology, and market, all of which requireastrong and fair legal framework. Otherwise, the industrial zones can lead to problems or in the worst-case scenarios to conflicts.
The law is hoped to address the sky-high land price issue; lack of reliable electricity, good road infrastructure, capital, and human resource development; frequent workers versus employers conflicts; illegal squatters issues; and out-of-date rules and regulations.
Before the enactment of the Industrial Zone Law, certain laws can be entertained as related to the industrial zone such as Factories Law (1951), Private Industrial Law (1990), and Small and Medium Enterprise Development Law (2015).
အခန်းပေါင်း ၂၀၊ ပုဒ်မပေါင်း ၇၅ ခုပါဝင်သော စက်မှုဇုန်ဥပဒေကို မေလ ၂၆ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် မူကြမ်းရေးဆွဲ တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး အဓိကနိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ့ဂျီဒီပီ၌ စက်မှုကဏ္ဍ၏ ပါဝင်မှုမှာ ၁၉၉၀−၁၉၉၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၃−၂၀၁၄ တွင် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၄−၁၅ တွင် ၃၅ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၁၅−၂၀၁၆ တွင် ၃၅ ဒသမ၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လာမည့် ၂၀၃၀−၂၀၃၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားသည်။
သို့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စုစုပေါင်း ခြောက်ဆယ်ခန့်ရှိသော စက်မှုဇုန်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရော ဒေသခံများကိုပါ အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ကောင်းမွန်သင့်လျော်သော ဥပဒေမူဘောင်များမရှိသေးပေ။ ယခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ဥပေဒမှာ အဆိုပါ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြသည်။
ယခု ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၃၂ အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ လုပ်ကိုင်လိုပါက ၁၀ နှစ် နှစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် စက်မှုဇုန်အတွင်းတွင် မြေယာရယူထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ပြီးစီးမည့် အချိန်ကာလနှင့် လုပ်ငန်းအစီအမံကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စက်မှုဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီများထံတင်ပြရ အတည်ပြုချက်ယူရမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါ အချိန်ကာလအတိုင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မဆောင်ရွက်ပါက မြေတန်ဖိုး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် နှစ်စဥ်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကာ မပေးဆောင်နိုင်ပါက မြေယာအသုံးပြုခွင့်ပါမစ် သို့မဟုတ် ဂရန်ကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇ အရ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်းမြေအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ကျူးကျော်နေထိုင်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားပြီး ကျူးလွန်ပါက သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေ၊ စက်မှုဇုန် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေ ဆုံးရှုံးနစ်နာစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးပါက ဒစ်ငွေ ငါးသိန်းမှာ သိန်း၂၀ အထိ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုများကို ရဲအရေးပိုင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
စက်မှုဇုန်များ တည်ထောင်ခြင်း၊ စက်မှုကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုန်ကြမ်းရရှိမှု၊ ဈေးသက်သာ ကောင်းမွန်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ နည်းပညာရနှင့် ဈေးကွက်ရရှိမှု စသည်တို့မှာ ကောင်းမွန်မျှတသော ဥပဒေမူဘောင်များ လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက စက်မှုဇုန်များ ဖော်ဆောင်ခြင်းက ပြဿနများ ပေါ်ပေါက်စေနိုင်ကာ ပဋိပက္ခများအထိပါ ဦးတည်စေနိုင်သည်။
ယခု ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော ဥပဒေသည် မြေယာဈေးကြီးမြင့်မှု၊ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်အောင် မရရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမွန်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း၊ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ပဋိပက္ခများ များပြားခြင်း၊ တရားမဝင် ကျူးကျော်နေထိုင်ခြင်း၊ ခေတ်မမီတော့သော ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်သုတေသနဌာန ဆိုထားသည်။
ယခုစက်မှုဇုန်ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခြားဆက်စပ်သည့် တည်ဆဲဥပဒေများမှာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Previous articleU.S. strikes ataHuawei prize: chip juggernaut HiSilicon
Next articleTravel disruptions, cost cutting key issues for U.S. business in China -report